ပျောက်ဆုံးနေသည့် သားဖြစ်သူ၏အလောင်းကို သယ်လာပြီးစျာပနကျင်းပရာ ရုတ်တရက်အလောင်းပိုင်ရှင်ရောက်လာပြီး | D Daily News
Home News ပျောက်ဆုံးနေသည့် သားဖြစ်သူ၏အလောင်းကို သယ်လာပြီးစျာပနကျင်းပရာ ရုတ်တရက်အလောင်းပိုင်ရှင်ရောက်လာပြီး
ပျောက်ဆုံးနေသည့် သားဖြစ်သူ၏အလောင်းကို သယ်လာပြီးစျာပနကျင်းပရာ ရုတ်တရက်အလောင်းပိုင်ရှင်ရောက်လာပြီး
လူတွေအသက်တစ်ရာမနေရပေမယ့် အမှုတစ်ရာပွေရ “ ဆိုသလို တစ်ခါတစ်လေမှာမထင်မှတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတိုက်ဆိုင်လွန်းတတ်ပါတယ် ၊ အခုလည်းငိုအားထက်ရယ်အားသန်ခဲ့ရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အသုဘအခမ်းအနားတစ်ခုမှာ အလောင်းမှားပြီးသယ်လာကာ သက်ပျောက်ဆွမ်းကပ်နေချိန် မူလအလောင်းပိုင်ရှင်က ပြန်လာတောင်းယူရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဇွန် ၂ ရက်နေ့ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ထိုင်း Khaosod သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ် ။
ထိုင်းနိုင်ငံဘူရီလန်းခရိုင် ခဲန်ဒုန်းမြို့နယ် စရဘိုးဝါးကျေးရွာ ရပ်ကွက် ၇ ၊ အမှတ် ၅၁ မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူသည် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က နေအိမ်မှမပြောမဆိုထွက်သွားပြီးပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် ရပ်ကွက်ကလူတစ်ချို့မှ ဖခင်ဖြစ်သူအသက် ၆၁ နှစ်အရွယ် Mr.Phairat Saiwan ထံသို့ ဇွန်လ ၁ရက်နေ့ည ၂၃:၀၀ ချိန်တွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကားလမ်းမှာလူတစ်ယောက်ကားကြိတ်ခံရပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းကြားရတဲ့တွက် ဒဆေးရုံမှာသွားကြည့်သင့်တယ်လို့သတင်းပေးလာပါတယ် ၊ သူတို့သားကလာ်းမကြာခဏယခုလိုအိမ်ကနေပျောက်လေ့ရှိပြီး အရက်မူးတဲ့အခါကားလမ်းဘေးမှလမ်းလျှောက်ပုန်နေကျဖြစ်သဖြင့် အဖေနဲ့အမေဟာ ဆေးရုံကိုညတွင်းချင်းလိုက်သွားကြပါတယ် ၊ အလောင်းဟာရင်ခွဲရုံထဲမှာခွဲစိတ်ဖာထေးကာထုတ်ပိုးပြီး ရယ်ဒီမိတ်ဖြစ်နေပါပြီ ။
တာဝန်ရှိရဲများနှင့်ဆေးဝန်ထမ်းများထံခွင့်တောင်းကာအလောင်းကိုဖွင့်ပြဘို့တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ဆရာဝန်က သေသူရဲ့မျက်နှာပိုင်းဟာ ကြည့်လို့မသင့်တော်သဖြင့်အခြားအောက်ပိုင်းကိုဘဲကြည့်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန် လက်မောင်းမှာဆေးမှင်ကြောင်ကို ညဘက်တွေ့လိုက်ရလို့ မိဘနှစ်ပါးမှာ ဒါဟာသူတို့သားဖြစ်ကြေဋင်း ပြောဆိုကာ ယူကြုံးမရငိုကြွေးပြီး ရဲများထံကရုပ်ကလပ်အလောင်းထုပါကို အခေါင်းထဲထည့်ကာနေအိမ်သို့သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ် ။
ညတွင်းချင်းအိမ်ရှေ့မှာမဏ္ဍပ်ထိုးကာ အသုအတွက်ပြင်ကြဆင်ကြပြီး မနက်စောစောတွင် သက်ဆိုင်ရာမှာသဂြိုလ်ခွင့်တောင်းပါတယ် ၊ ရပ်ကွက်အုပ်မှူးကြီးနဲ့အတူ နာရေးအသင်းရံပုံငွေမှ အသုဘစရိတ် ဘတ် ၇၀၀၀၀ ထုပ်ယူခဲ့ပြီး မီးခိုးတိတ်ချက်ချပြုတ်ကြပေါ့ ၊ သံဃာတွေပင့်ပြီးသက်ပျောက်ဆွမ်းသွပ်နေချိန် မနက် ၁၁:၀၀ ချိန် သူတို့အသုဘအိမ်ကို လူတစ်စုရောက်လာပြီး ရေခဲခေါင်းထဲကရုကလာပ်အလောင်းရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်ရှု့ခွင့်တောင်းရင်း အခြေအတင်စကားများကြပါတယ် ။
ဖခင်ဖြစ်သူက သေဆုံးသူသူ့သား၏များနှာဟာရပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေသဖြင့် ဆရာဝန်တွေမှာထားသည့်အတိုင်း မျက်နှာကိုလုံးဝဖွင့်ပြခဲ့ပါဘူး ။
အဲ့လိုနဲ့ တစ်ဖက်ကလူကလည်း သေဆုံးသူဟာ အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်ခန့်က ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ညီအရင်းများဖြစ်နေမလာဆိုပြီးခွင့်တောင်းလိုက်၊ အိမ်ပိုင်ရှင်က ဗူးဆိုဖရုံမသီးပေ ၊ ဆရာဝန်မှာတဲ့ဆန်တစ်ခွဲ တစ်တင်းနဲ့မလဲနိုင်ဆိုင်သလိုပါဘဲ ။ စကားနားထောင်တာပါ ။
အဲ့အချိန် မဏ္ဍပ်ထဲက ချက်ရေးပြုတ်ရေးကော်မတီက သူတွေရုတ်ရုတ်သဲသဲနဲ့အော်ဟစ်လန့်ဖျတ်တဲ့အသံတွေကြောင့် အားလုံးကအသံလာရာဘက်ကိုအာရုံရောက်လွှဲလိုက်ချိန်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် သရဲအခြောက်ခံလိုက်ကြရသလို အံ့ဩမှင်သက်နေကြပါတယ် ၊ ဖြစ်ပုံက သားဖြစ်သူအသုဘကြီးက ဆိုင်ကယ်ဘေးတွဲကိုမောင်းပြီး မဏ္ဍပ်ထဲကိုဆောက်တည်ရာမရအောင်းဝင်လာနေခြင်းကြောင့်ပါ ၊ ထိုသူကလည်းသူ့အိမ်ထဲမှာ မဏ္ဍပ်ကြီးဟီးနေပြီး ချက်ပြုတ်နေပုံထောက်ရင် သူ့ဖခင်လား ? သူ့မိခင်လား ?
တစ်ယောက်ယောက်တော့သေချာနေပြီ ၊ ရွှေတောင်ကြီးပြိုပါပြီဆိုပြီး ငိုမဲမဲ့နဲ့ အခေါင်းစင်နားပြေးဝင်အလာ ၊ အသုဘမှာလာကူနေကြတဲ့ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးပါအပါ ထိုင်ရာမှ ထကာ ပြေးသူကပြေးနဲ့ ကုလားတိုက်ကျားဝင်ကိုက်သလိုဆူညံကုန်ပါတယ် ၊ ပြေးလာသူကအလောင်စင်နားအရောက် ပိုပြီးအံ့ဩတာက အခေါင်းနားကစျာပန ဓါတ်ပုံဟာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ဓါတ်ပုံဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဖခင်ဖြစ်သူကလည်း သေရွာပြန်သားကို “ သား “ ဆိုပြီးပြေးဖက်ကာ အခေါင်းထဲက အလောင်းဟာ ဘယ်သူလဲဆိုပြီးလူတွေအားလုံး သို့လောလောဖြစ်နေချိန် စောစောကအလောင်းကိုကြည့်ခွင့်တောင်းတဲ့အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် Mr.PaTong PhulWong ဟာအလောင်းကိုဖွင်ဖောက်စစ်ဆေးကြည့်တော့မှဘဲ လွန်ခဲ့ ၂ ရက်ကနေအိမ်ကနေ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သူ၏ညီအရင်း အသက် ၃၅ နှစ်ရွယ် Mr.PaungPhul PhuWong ဖြစ်နေပါတော့တယ်ဗျာ ။ ( ငိုခန်း )
အာ့ကျကျတော့ သက်ပျောက်တရားပေးနေတဲ့ဆရာတော်က ကံဇာတာပြန်မြှင့်ပေးတဲ့တရားပြန်ပေးရပြီး အလောင်းမှားယူလာတဲ့ကိစ္စ သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားရတော့မည် ၊
မိဘကို အသိမပေးဘဲ သူငယ်ချင်းဆီမှာ ၂ ရက်တာသောက်စားမူးရူးနေတဲ့ သားဖြစ်သူ Mr.Sawst Saiwan ကို ဖခင်ဖြစ်သူက ဆူရအခက် ၊ ဝမ်းသာရအခက် ၊ ဟိုဘက်မှာက သေတာတောင်အိမ်ကိုမှားပြီးရောက်လာတဲ့ ညီဖြစ်သူအလောင်းကိုကြည့်ပြီး ဒေါသထွက်ရမှာလား ? ဝမ်းနည်းရမှာလား ? မသိ ။
ချက်ရေးပြုတ်ရေးသမားတွေကတော့ “ အဖေ ကျွန်တော်မသေပါဘူးလို့ “ သူ့ဓါတ်ပုံကိုကိုင်ပြီး အမူးမပြေသေးတဲ့စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ပြုံးနေတဲ့ သကောင့်သားကိုကြည့်ကာ သူတို့အားလုံးရဲ့ မျက်နှာတွေသည်လည်း ပြုံးစိစိကိုဖြစ်လို့ပါဆို
လူ့ဘဝ အမျိုးမျိုးကြုံရပါသည် ။
Source : Si Thu Maung
Previous articleအသက်နဲ့ရင်းတိုက်နေရတာတောင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဘဲ ငါတို့ G Zလေးတွေကွ
Next articleအရပ်ပုတော့ လူရာမသွင်းကြဘူး လူဖြစ်ပြီး ရင်ဘောင်တန်းလို့မရလို့အရမ်းဝမ်းနည်းရတယ်